पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी गर्ने ट्रम्पको घोषणा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी गर्ने ट्रम्पको घोषणा
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ बजेट अन्तर्गतका आफ्ना योजना घोषणा गर्दै उनले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न, सडक, बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माण गर्न चाहेको बताए।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अमेरिकी जनतालाई आफ्ना देशका लागि लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले मध्यपूर्वमा मूर्खतापूर्ण ढङ्गले ७० खर्ब डलर खर्च गरिएको बताए।
ह्वाइट हाउसमा बोल्दै उनले उक्त कार्यक्रममा दश बर्षमा १५ देखि १७ खर्ब डलर खर्च गरिने र त्यसको अधिकांश हिस्सा राज्य तह र निजी क्षेत्रबाट आउने उल्लेख गरे।
बीबीसीका एन्थोनी जर्चर आफ्नो विश्लेषणमा लेख्छन्, राजनीतिज्ञले मन पराउने एउटा प्रमुख विषय पूर्वाधारको लगानी हो। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, व्यवसायलाई बढावा दिन्छ र पदमा बहाल नेताहरूलाई मतदातासामु आफ्ना उपलब्धि प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
त्यही भएर अहिले सार्वजनिक योजना ट्रम्प प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसको लोकप्रियता सीमित हुने र त्यसलाई अमेरिकी संसद्बाट पारित गराउन उनलाई गाह्रो हुने देखिन्छ।
सबैभन्दा मुख्य समस्या ह्वाइट हाउसले पुल, रेल, सडक वा सुरूङमार्गका लागि आफ्नो योजनामा कुनै नयाँ रकम विनियोजन गरेको छैन।
बरू उसले अरू सरकारी कार्यक्रमबाट बजेट तानेर खर्च गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसको अर्थ के के काट्ने भन्ने अलोकप्रिय निर्णय अमेरिकी सदनहरूले लिनुपर्नेछ। यो योजना राज्य र स्थानीय निकायहरूमा अलि बढी नै निर्भर देखिन्छ। तर उनीहरूका बजेट सधैँ सीमित हुने गरेका छन्।
हालै गरिएको संघीय अनुदान र स्थानीय करहरूको कटौतीले चाहिने स्रोत जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ निजी लगानीको पनि चर्चा गरिएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा त्यो आकर्षक सुनिन्छ। तर अमेरिकी नागरिकहरू व्यापारिक घरानाहरूले सेवा प्रयोगवापत लगाउने गरेका कर र शुल्कबाट लामो समययता दिक्क छन्।
यसको अर्थ कंग्रेसले ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको पूर्वाधार विधेयक पारित गर्दैन भन्ने होइन्। जब उक्त कानून अनुमोदन हुनेछ त्यसको स्वरूप अहिले प्रस्ताव गरिएको भन्दा निकै फरक हुने सम्भावना छ।